Guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis oo la jirdilay xabsigana la dhigay - Muqdisho Online
Home Wararka Guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis oo la jirdilay xabsigana la dhigay
Guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis oo la jirdilay xabsigana la dhigay
Sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen MOL waxaa caawa xabsiga la dhigay Guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Sharmarke Ladane iyadoo ay gurigiisa kala baxeen ciidanka Booliska ee Degmada Cabdicasiis.
Lama oga ilaa hadda sababta loo xiray oo gurigiisa loogala baxay, balse qof goob joog ahaa markii la qabanayay Sharmarke Ladane aya MOL u sheegay in si xun loo jirdilay uuna aad ugu qeylinaayay in feeraha ay ka jabeen “Muslin sow ma tihiin ha i dilina ee geeya xabsiga, iga daaya qoriga aad igu garaaceysaan” Ayuu ku qeylinaayay Sharmarke sida uu noo xaqiijiyay goob jooge ku sugnaa agagaarka Guriga Gud. Hore ee Degmada Cabdicasiis.
MOL oo xiriir la sameeyay taliska Booliska Gobolka Banaadir ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan dhacdadan, wuxuuna sarkaalkii aan la hadalnay uu noogu jawaabay “Haddaadan rabin in adiga lagu garaaco ha i weydiin ninka aad sheegeysid”
Waxaa caada iska noqotay in shacabka lagu gumaado magaalada Muqdisho, waxaana taa sababteeda leh in shacabka ay iyaga ka gaabiyeen in ay ka dhiidhiyaan gummaadka ay kooxda kalitalisnimada raadineyso ay ku hayaan shacabka Muqdisho.
Previous articleEthiopia Amhara ‘coup ringleader killed’
Next articleKhiyaanada RW Kheyre iyo safarkiisa Dhuusamareeb